Ogaden News Agency (ONA) – Wadanka Ruushka oo Diyaarad Lagaga Soo Diray Dalka Suuriya.
Wadanka Ruushka oo Diyaarad Lagaga Soo Diray Dalka Suuriya.
Posted by ONA Admin	/ August 3, 2016
Wadanka Ruushka ayaa sheegay in mid kamid ah diyaaradahooda qumaatiga u kaca oo ay isticmaalayeen Ciidamada Ruushka ee ku sugan dalka Suuriya in toogasho lagu soo riday shalay. Wasaaradda gaashaandhiga ee dalka Ruushka, ayaa sheegtay in shan qof ay saarnaayeen diyaaradaasi markii ay ku soo dhacday gobalka Idlib oo ka tirsan dalka Suuriya.
Waxaa lagu soo waramayaa in dhammaan shantaasi qof ay ku dhinteen shilkan. Arintan ayay saxaafada aduunku aad uga hadashay. Khubarada iyo Siyaasiyiinta caalamka ayaa ku tilmaamay inay khasaare laxaad leh ku tahay dalka Ruushka shilkan diyaarada lagaga soo riday.
Afhayeen u hadlay Wasaaradda Arrimaha Difaaca ee Ruushka ayaa sheegay in diyaaradan gantaal lagu dhuftay iyadoo ka soo laabatay dhinaca magaalada Xallap oo ay gaadhsiisay gargaar bani’aadanimo. Kooxaha falaagada ah ayaa kol hore sheegtay inay iyaga soo rideen diyaaradaasi. Waxay baraha buslahada (Social Media) soo dhigeen sawirro iyo muuqaallo muujinaya burburka diyaaraddan.